09/02/13 ~ Myanmar Forward
ရွှေပြည်သာတံတား လုံခြုံရေးရဲကင်းတွင် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
Posted by drmyochit Monday, September 02, 2013, under မှုခင်း | No comments
လှိုင်သာယာမြိုနယ်နှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော ရွှေပြည်သာတံတား၏ လုံခြုံရေး ရဲကင်းတွင် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ကာ မိဘနေ အိမ်သို့ တစ်ဦးတည်း ပြန်လာသော ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့် ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ မိန်းကလေး၏ ဆွေမျိုးသားချင်း များက ပြောကြားသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ် (၂၀) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တေဇ ပတ်လမ်းတွင် နေထိုင်သော မိန်းကလေးသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ကာ ယင်းနေ့ နံနက် ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မိဘဖြစ်သူ၏ နေအိမ်ပြန်ရန် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ မောင်းသမားကို တညင်းကုန်းလမ်းဆုံသို့ ပို့ဆောင် ခိုင်းစဉ် ရွှေပြည်သာတံတား ရဲကင်းအရောက်၌ ဆိုင်ကယ်ပျက်သွားသဖြင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းသူက ကယ်ရီခ ငွေတစ်ထောင်ကျပ်ကို တောင်းယူပြီး ရဲကင်းတွင် ထားခဲ့ရာမှ အဆိုပါ ရဲကင်းတွင် တာဝန်ကျသူ ဒုတပ်ကြပ်ဝင်းဌေးက အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် တစ်ကြိမ် ပြုကျင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါမိန်းကလေး၏ ယောက္ခမဖြစ်သူက ပြောကြားသည်။
“အဲဒီညက မိသားစုတွေ ဒိုးဇက်ကစားရင်း သူ့ယောက်ျားနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး ည ၁ နာရီခွဲလောက်မှာ တစ်ယောက်တည်း ထွက်သွားတာ သူ့ယောက်ျား လိုက်ရှာတော့ မရှိတော့ဘူး။ မနက် ၅ နာရီလောက် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့က လာအကြောင်းကြားမှ ဒီကိစ္စဖြစ်မှန်း သိရတာ။ သမီးက ပြောတာတော့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ အချိန်မှာ ကျန်တဲ့ရဲနှစ်ဦးက မီးသီးသွားဝယ်နေတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဓမ္မပြုကျင့် ခံရသူသည် ငယ်ရွယ်စဉ်က ငှက်ဖျားပိုး ခေါင်းထဲသို့ရောက်ကာ ဆေးကုသခဲ့ရသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် စိတ်လွတ်လေ့ ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ မောင်းသူသည် ဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းကာ ပြန်လှည် ထွက်သွားပြီး အလယ်ရွာ ကယ်ရီဂိတ်တွင် ဆိုင်ကယ်ကို အပ်ထားခဲ့၍ ဂိတ်သို့ပြန်ကာ သူငယ်ချင်းများကို ရွှေပြည်သာ တံတားလုံခြုံရေး တာဝန်ကျရဲများက ၎င်းကို ထိုးကြိတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကို သိမ်းယူကာ ခရီးသည် အမျိုးသမီးကို ရဲကင်းတွင် ခေါ်ထားသည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း၊ ယင်းနောက် ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီ သမားလေးဦးနှင့်အတူ အဆိုပါရဲကင်းသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိ လာပြီး ရဲများကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ရဲကင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသောမှန်ကို ခဲဖြင့်ထုခွဲ ဖျက်ဆီးခြင်း ပြုလုပ်သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ဆေးကုသ ခံယူနေရကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
“တာဝန်ကျ ရဲသုံးဦးကို ရဲစည်းကမ်း ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမှာပါ” ဟု လှိုင်သာယာ မြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးက ပြောကြားသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ရိုက်နှက်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်စဉ် အမှန်ပေါ်ပေါက်ရန် ထန်းတပင်မြို့ နယ် သောင်ကြီးနှင့် အဖျောက် တို့မှ စခန်းမှူးသုံးဦးတို့ အဖွဲ့ဖြင့် ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးနေပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ လှိုင်သာယာ မြို့မရဲစန်းက (ပ) ၉၈၀/၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၃၂/၁၁၄ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (ပ) ၉၈၁/၁၃၊ ပုဒ်မ ပပက ၆(၁) ဖြင့်လည်းကောင်း စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းကထပ်မံပြောကြားသည်။
မော်လမြိုင်၊ စက်တင်ဘာ ၁
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ကလိုင်းနိုင်း ကျေးရွာတွင် လယ်သမားတစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် DKBA တပ်သားနှစ်ဦးကို ၁၅ ရက်ကျော်ကြာ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ တာဝန်မှူးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ DKBA တပ်သားမျိုးလင်းနှင့် ဝင်းကျော်တို့ကို ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၃၀၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသော်လည်း ယင်းတပ်သား နှစ်ဦးမှာ ထွက်ပြေးနေသဖြင့် တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိကြောင်း ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါသေနတ်ဖြင့် ပစ်ခံရသော ဦးကုလားလေးသည် DKBA တပ်ဖွဲ့က စိုက်ပျိုးထားသော ရော်ဘာ ပျိုးပင်စိုက်ခင်း နေရာတွင် စပါးစိုက်ရန် ထွန်ယက်ခြင်းကြောင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျိုက်မရော အခြေစိုက် DKBA တပ်ဖွဲ့မှ အရာရှိတစ်ဦးက ဆိုသည်။
သေနတ်ဖြင့် အပစ်ခံရသူ ဦးကုလားလေးသည် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရပြီး အသက်အန္တရယ် စိုးရိမ်ရသည့် အခြေအနေ ရှိကြောင်း ဦးကုလားလေး၏ ဖခင် ဦးဇီကီယာက ဆိုသည်။
အဆိုပါ DKBA တပ်သားနှစ်ဦးသည် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ကလိုင်းနိုင်းကျေးရွာမှ လယ်သမား သုံးဦးကို လာရောက် ခေါ်ယူသွားပြီး စကားများကြရာမှ ဦးကုလားလေးကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Windows 8 မှာ အရင် Windows တွေဖြစ်တဲ့ Windows XP/Windows7မှာလို Start menu ခလုတ်လေးမပါတော့တာကြောင့် သုံးရတာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် StartIsBack 2.1.2 ကို ကွန်ပျူတာမှာသွင်းထားသင့်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးက Windows 8 ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းနားမှာ အရင် Windows တွေမှာပါတဲ့ Start button ခလုတ်မျိုးလေး Windows 8 မှာထည့်သွင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးဝင်ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုပါပဲ။ StartIsBack 2.1.2 for Windows 8 ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
လားရှိုး၊ စက်တင်ဘာ ၂။
လားရှိုးမူးယစ် အထူးတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအုပ်တင်ဌေး ဦးစီးသော အဖွဲ့သည် ရပ်ကွက် (၅)၊ နယ်မြေ (၁၃)၊ အိမ်နံပါတ် (၃၁၃)တွင် သြဂုတ်လ ၃၁ရက်နေ့က စိတ်ကြွဆေးဝါး အများအပြားကို ဖမ်းဆီး
အဆိုပါရဲအဖွဲ့သည် နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များမှ မမော်ရွှေကျောင်း နေထိုင်ရာအိမ်အား သတင်းအရ၀င် ရောက်ရှာဖွေရာ ၎င်းကိုင်ဆောင်ထားသော ကျွတ်ကျွတ်အိပ်မှ အပြာရောင် ပလပ်စတစ်အိတ်ငယ်ဖြင့် ထည့်လျှက် တစ်ထုတ်လျှင်(၈၈)နှင့် (၁)အမှတ်တံဆိတ် တစ်ဖက်စီပါသော စိတ်ကြွဆေးပြား (၂၀၀)ပြားပါ (၉)ထုပ်၊ (၁၇၅)ပြားပါ (၁)ထုပ် စုစုပေါင်း စိတ်ကြွဆေးပြား (၁၉၇၅)ပြား၊ အလေးချိန် (၁၇၇.၇၅)ဂရမ်အား သိမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစိတ်ကြွဆေးပြားများအား လားရှိုးမူးယစ်အထူးအဖွဲ့မှ သက်သေများရှေ့မှောက်တွင် သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည့်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ဥပဒေပုဒ်မ မယ (ပ) ၃၈/၂၀၁၃၊
မူး/စိတ် ၁၅/၁၉(က)/၂၁ ဖြင့် အဆိုပါ လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူ မမော်ရွှေကျောင်းအား အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ခွေးကျောင်းနေသည့် အိမ်အကူအမျိုးသမီးတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည်ဆိုသည့် အမှုတစ်ခုကို သင်္ဃန်း ကျွန်း ရဲစခန်း က သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်တွင် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီအချိန်က သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လမ်းတစ်ခုအတွင်းတွင် အိမ်ရှင် မွေး ထားသော ခွေးအား သံကြိုးဖြင့် ချည်လျက်ကျောင်းနေစဉ် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည်ဟု တိုင်တန်း ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲဌာ နက ဆိုထားသည်။
အဓမ္မပြုကျင့်ခံရကြောင်း တိုင်တန်းထားသူမှာ အသက် (၂၀)နှစ်ခန့်ရှိသော အိမ်အကူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းအား လမ်းအတွင်း ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသော နေအိမ်တွင် ပန်းရံလုပ်ကိုင်သူ တစ်ဦးက အဓမ္မပြု ကျင့် ခဲ့သည်ဟု ရဲအား တိုင်တန်းထွက်ဆိုထားသည်။
ခွေးကျောင်းနေစဉ် သူမအား ပန်းရံလုပ်ကိုင်သူ (လူမြင်မှတ်မိ) သူ နှစ်ဦးနှင့် တွေ့ရှိပြီး “လိုက်မလား” ဟု မေးသဖြင့် “ဘာလို့ လိုက်ရမှာလဲ” ဟု ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ထို့နောက် တစ်ဦးက လက်တွင်ကိုင်ထားသော ခွေးချည်သံကြိုးအားယူ၍ ခွေးအားခေါ်ထားပြီး ကျန်တစ်ဦးက ပါးစပ် ပိတ်ပြီး ဆောက်လုပ်ဆဲတိုက်၏ ပထမထပ်သို့ အတွင်းဆွဲခေါ်သွားကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဆွဲလှဲ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သည် ဟု တိုင်တန်းထားသည်။
ထို့ကြောင့် သင်္ဃန်းကျွန်းရဲစခန်းက (ပ) ၃၆၃/၂၀၁၃ဖြင့် အမှုဖွင့်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူဟု တိုင်တန်း ခံထား ရသူများ အား ဖမ်းဆီးရမိရန် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးရမိပါကလည်း ပုဒ်မ ၃၇၆/၁၁၄ ဖြင့် တရားစွဲတင်ပို့ရန် စီစဉ်ထားရှိထားကြောင်း တိုင်းရဲဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
Posted by drmyochit Monday, September 02, 2013, under ဓါတ်ပုံများ | No comments
Posted by drmyochit Monday, September 02, 2013, under ပေးစာ | 1 comment
အခုတလောသတင်းတွေထဲမှာHot နေတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်သောဆရာမဒေါ်စိုးစိုးခိုင်နှင့် ပတ်သတ်ပြီးပြောချင် ပါတယ်။ဆရာမဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်၊ဘာလို့ 
ဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲရဲတင်းတင်းမှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ မသိရင်၈၈၈၈
တာတွေ့ ရတာစိတ်မကောင်းစရာပါ။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ရှင်းထားတာခွင့်ရက်
တွေလဲကျော်ယူတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အခုလို စံပြပုံစံမျိုးပြုလုပ်သင့်တယ်
ကနေ ဘက်စုံပြင်ဆင်နေသည်ဖြစ်ကာ ပညာရေးဘက်တွင်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲ
မှုများကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုပြောဆိုခြင်းကြောင့် ကျမသည် အစိုးရဘက်
တော်သားလဲ မဟုတ်ရပါ။ အတိုက်အခံဘက်တော်သားလဲ မဟုတ်ရပါ။ သမ္မတကြီး
ဦးသိန်းစိန်နှင့် အန်တီစုတို့၏ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို အမြဲတမ်းအားပေးနေသူပါ။ သမ္မတကြီးနှင့်အန်တီစုတို့ သည်လည်းပညာရေးခေတ်မှီတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေ
ပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ကြမှသာလျှင် ပညာရေးသည် အမှန်တကယ်ခေတ်မှီ တိုးတက်
ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ထို့ အတွက် မိမိတာဝန် မိမိကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ဖို့ လိုအပ်
လွှတ်ရတယ်။ဆရာ မလာရတာနဲ့၊လာတဲ့ဆရာကလဲ စာသိပ်မသင်တာနဲ့ ကျမတို့ လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲကိုမသိပါဘူးတော်"ဟုပြောခဲ့ဖူးပါသည်။အဲ့ဒီတုန်းကတောင်စဉ်းစား
မိတယ်။ တချို့ ဆရာကခွင့်ပြန်တာတို့ ဘာတို့ ဆို အစားဆရာတစ်ယောက် ၀င်ရတယ်။
အစားဝင်ပေးရတယ် ဆိုတာကလဲ ကိုယ့်အချိန်ကိုယ် အပျက်ခံပြီးဝင်ရခြင်း မဟုတ်ပါ။
လိုခွင့်ရက်တွေအများကြီးကျော်လွန်ပြီး နေမယ်ဆိုရင်သူ့ အစားဝင်သင်ပေးရတဲ့သူက
ကောကြာလာရင် ဘယ်လုပ်ပြီး လုပ်ပေးချင်ပါတော့မလဲ။ အဲ့တာတွေကို အခုလိုခွင့်ပြန်
နောက်ကျတဲ့ ဆရာမဒေါ်စိုးစိုးခိုင် သေချာစဉ်းစားသင့်တယ်။
နောက်ပြီးအခုဖြစ်စဉ်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်တာက ၈၈၈၈ငွေရတု ပွဲတက်လို့ဆိုပြီးတော့
ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာတွေ့ ရပါတယ်။တကယ်ကတော့ ကျမထင်တာ မဆိုင်ဘူး ထင်တယ်။ကျမလဲ၈၈၈၈ငွေရတုပွဲမှာ ဒံပေါက်တောင်သွားစားကြသေးတယ်။ နောက်ပြီး
လို့ အလုပ်ဖြုတ်ကြေးဆိုရင် ကျမတို့ သူငယ်ချင်းတွေ အုပ်စုလိုက်ကြီး အလုပ်ဖြုတ်ခံရ
မှာပေါ့။ အဲ့ဒီလို မဆိုင်ရာကို ခေါင်းစဉ်တက်တာကတော့ ၈၈၈၈ငွေရတုပွဲကိုကော၊ အဲ့ဒီဆရာမကို ခွင့်ရက်ကျော်လို့ အနားပေးလိုက်တဲ့ သူတွေအတွက်ကော မကောင်း ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ကျမတို့ မြန်မာစကားပုံလိုပေါ့။ "ထန်းသီးကြွေခိုက်၊ကျီးနင်းလိုက်ဆို
ကျမအနေနဲ့ ဆရာမအချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းမစာလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ကျမလဲ ၀န်ထမ်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းခွင့်ရရင်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ရက်စေ့လို့ 
ပြန်ခါနီးဆို ပြန်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တွန်းအားပေးရတာ။ ခွင့်ရက်ကျော်မှာ စိုးရိမ်လို့ ပါ။ခွင့်
မယ့်ဆရာ/ဆရာမတွေရဲ့ စိတ်တွေကို တွေးရင်းနဲ့ အချိန်မှန်ရောက်အောင်ပြန်ရတာပါပဲ။
ကျမတို့လိုကျောင်း ဆရာမ၀န်ထမ်းတွေတင်မဟုတ်ပါဘူး။၀န်ထမ်းတိုင်းမှာ တာဝန်ချိန်
ပျက်ကွက်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့ စည်းကမ်းနဲ့ သူ၊ သူ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ သူ ရှိပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းတွေဆိုပိုတောင်ဆိုးပါတယ်။အခန့် မသင့်ရင်သေဒဏ်တောင်
ပြရမလဲဆိုတာပဲတွေးတတ်ကြပြီး ပြသနာကိုရဲရဲတင်းတင်းဖြေရှင်းဖို့ ဝန်လေးနေတတ်ကြ
ပါတယ်။အဲ့လိုတွေကြောင့်လဲ အခုလိုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ အခုပြောချင်တာကတော့ အဲ့ဒီခွင့်ကျော်လွန်နေထိုင်ပြီး ၈၈၈၈ငွေရတုပွဲ
တက်လို့ ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ ဆရာမဒေါ်စိုးစိုးခိုင် အနေနဲ့ ကိုယ့် တာဝန်ကို
ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ ဆရာမအတွက် ၈၈၈၈ ငွေရတုပွဲကိုလဲ အကျည်းမတန်
စေချင်ပါ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလဲ တောင်းဆိုချင်တာကတော့ နောင်လဲ စည်းကမ်း
မလိုက်နာတဲ့သူဆိုလျှင် စာရေးသူ ကျမကစပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါလို့ တောင်းဆို ပါရစေ ရှင်။ သို့ မှ သာလျှင် နိုင်ငံတော်မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ လျှက်ရှိတဲ့ ပညာရေး
စနစ်သည်လဲအမှန်တကယ်ထိရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါ်စိုးစိုးခိုင်အနေဖြင့်လဲ ကိုယ့်
တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်သောဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေး
မှတ်ချက်။ ။ပေးပို့ ဆရာမ၏ ကျောင်းအမှတ်နှင့် မြို့ နယ်များကိုလိုအပ်ချက်
အဆိုပါ ပွဲတော်ကို (၁၉၆၆)ခုနှစ် ကတည်းက ပုံမှန် ကျင်းပလာခြင်း ဖြစ်သည်။ နော့တင်ဟေးလ် ကာနေဗယ်လ်သည် လူအများ လမ်းပေါ်ထွက်လာကာ ကျင်းပကြသည့် ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ပွဲတော်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၊ ကန်ဆင်တန်နှင့် ချယ်လ်ဆီးအရပ်ရှိ လမ်းမများပေါ်တွင် နှစ်စဉ် ပြု လုပ်မြဲဖြစ် သည့် နော့တင်ဟေးလ် ကာနေဗယ်လ် ပွဲတော်ကို ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ပွဲတော်ကို (၁၉၆၆)ခုနှစ် ကတည်းက ပုံမှန် ကျင်းပလာခြင်း ဖြစ်သည်။ နော့တင်ဟေးလ် ကာနေဗယ်လ်သည် လူအများ လမ်းပေါ်ထွက်လာကာ ကျင်းပကြသည့် ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ပွဲတော်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ (၂)ရက်ကြာ အချိန်သတ်မှတ် ကျင်းပခဲ့သည်။ ကာရေဘီယန် ဒေသတွင် ခေတ်စားသည့် ကာနေဗယ်လ် ပွဲတော်များကဲ့သို့ပင် လှပဆန်းကျယ်စွာ တောက်တောက်ပြောင်ပြောင် တန်ဆာ ဆင်ထားသော ဘီကနီများ၊ ငှက်မွှေးငှက်တောင်နှင့် အလှဆင်ထားသည့် ဖက်ရှင်များ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဝတ်စား ဆင်ယင် ပုံများနှင့် အတူ လူအများအပြား လမ်းပေါ်လှည့်လည် ကပြကြသည်။
နျူ ကလီးယား ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိသူများ အလုပ်ပါ တစ်ပါတည်း ရရှိမည်
နျူ ကလီးယားဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိ သူများ အလုပ်ပါ တစ်ပါတည်း ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံနှင့်နည်း ပညာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နျူကလီး ယားဘာသာရပ် ဖြင့် ကျောင်းပြီး သူမှာ တစ်နှစ်လျှင် အများဆုံး ၁ဝဦးခန့်သာရှိပြီး ယင်းဘာသာ ရပ်ကို စိတ်ဝင်တစား တက်ရောက် သူ အလွန်အမင်းနည်းပါးလျက်ရှိ နေကြောင်း သိရသည်။
''မြန်မာနိုင်ငံမှာက နျုက လီးယားဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စား သူနည်းတယ်။ အဓိကကတော့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ကြောင့်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနအ နေနဲ့ကတော့ ကျောင်းပြီးတဲ့သူ တော်တော်များများကို ထိန်းထား ပါတယ်။ ကျောင်း ဆရာ၊ ဆရာမ ပြန်လုပ်ချင်လုပ်၊ မဟုတ်ရင် ဌာန အတွင်းမှာ သင့်တော်တဲ့ နေရာ တွေကိုပေးထားပါတယ်။ ကျောင်း ပြီးတဲ့သူတွေကို အလုပ်အကိုင်အ တွက် သင့်တော်တဲ့ နေရာ တွေကို တစ်ပါတည်း ပေးသွားမှာပါ'ဟု အဆိုပါ တာဝန် ရှိ သူက ပြောသည်။
နျူကလီးယားဘာသာရပ် ကို ကျောက်ဆည်နည်းပညာတက္က သိုလ်တွင်သာ ထည့်သွင်းသင်ကြား လျက်ရှိ ပြီး ယမန်နှစ်က မန္တလေး နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် သင် ကြားခဲ့သော်လည်း တက်ရောက် မည့် ကျောင်းသားမရှိခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ အဆိုပါတာဝန်ရှိသူက ''ဘာ သာရပ်တိုင်းက အသုံးဝင်ကြတာ ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျောင်းသားတော် တော်များများက ဝါသနာထက် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လို့မြန်တဲ့ ဘာသာ ရပ်တွေကိုပဲ ရွေးချယ်ကြတော့ တခြားဘာသာရပ်တွေမှာ ပညာ ရှင်တွေ နည်းကုန်တယ်။ ဆောက် လုပ်ရေးတွေ၊ စက်မှုတွေမှာပဲ စုပြုံ နေကြတယ်။ သူတို့ကိုကျတော့ လူကများတဲ့အတွက် အလုပ်အ ကိုင်ဖန်တီးပေး ဖို့ခက်တယ်။ နျူ ကလီးယားလို ဘာသာရပ်ကတော့ လူဦးရေတအားနည်းတော့ ဖန် တီးပေး နိုင် တယ်''ဟု ဆက်လက် ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းဆင်း သောအင်ဂျင်နီယာအများစုမှာ ဆောက်လုပ် ရေး၊ စက်မှု၊ လျှပ်စစ်၊ အိုင်တီဘာသာရပ်များကိုသာ အဓိကထား တက်ရောက်လျက် ရှိကြကြောင်း၊ ကျောင်းပြီးသော ကျောင်းသား အများစု မှာလည်း အလုပ်အကိုင်အတွက် အခက်အ ခဲများရှိနေကြောင်း ကျောင်းပြီးသူ တချို့ထံမှ သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး Electrical Powerဘာသာရပ်ဖြင့် ကျောင်းပြီး သူတစ်ဦးက ''အလုပ် အကိုင် တစ်ခါတည်းဖန်တီးပေး မယ်ဆို တော့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းပြီး တော့ အလုပ်ရဖို့ခက်တယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်ခေါ်တော့ သွားလျှောက် တယ်။ ခေါ်တာက ၁ဝ ဦးလောက် ပဲ။ လာလျှောက်တာ အယောက် ၁ဝဝဝကျော်လောက် ရှိတယ်''ဟု ပြော သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်ပေါင်း၃၃ခု၊ ကွန်ပျူ တာတက္ကသိုလ် ၂၅ခု၊ နည်းပညာ ကောလိပ် သုံးခု၊ GTI အဆင့် သိပ္ပံ ၁၁ခု၊ THS အဆင့် ကျောင်းပေါင်း ၃၆ကျောင်းမှာ နည်းပညာကျောင်း သားပေါင်း များစွာကို မွေးထုတ် ပေးနေသော် လည်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိမှု နည်းပါးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ 1212 Call Center မှပြောပြရာတွင် “SMS စနစ်နဲ့ အင်တာနက် လျှောက်ထားတဲ့နေရာမှာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုလို့ ရပြီဆိုတဲ့ Message က ချက်ချင်းပြန်မလာ တတ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ 1331 ကို SMS ထပ်မံလျှောက် ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လျှောက်ထားတဲ့ ဖုန်းအရေအတွက်က များတဲ့အတွက် လိုင်းကျပ်သွားတာမျိုး၊ လျှောက်ထားမှုတွေ စုပြုံသွားတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်မျိုးကျရင်တော့ အချို့ဖုန်းတွေမှာ Message ပြန်မရတတ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို
အတွဲ (၁၄)၊ အမှတ် (၃၄)
ဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါ ID စက်ဝိုင်းထဲမှာ Contact ပုံတွေနဲ့ ဖော်ပြပေးမယ့်
Call receive app ဖြစ်ပါတယ်။ Animation များဖြင့် ဖော်ပြပေးလို့ ..
အလန်းစားပါပဲ။ Animation သုံးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘာပဲလုပ်နေနေ ဖုန်းဝင်လာတာနဲ့ စက်ဝိုင်းလေးနဲ့အတူ ဖော်ပြပါမယ်။
စက်ဝိုင်းကို ဘယ်၊ ညာ၊ အောက် ရွှေ့ပြောင်းပြီး ဖုန်းလက်ခံတာ ၊
မကိုင်တာ၊ ခဏစောင့်ခိုင်းတာ တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ..
floating ဖြစ်လို့ caller id စက်ဝိုင်းလေးကို ကြိုက်တဲ့နေရာ ရွေ့ထားလို့
ရပါတယ်။ ဖုန်းဝင်လာတဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်နေတာလဲ ဆက်လုပ်ရင်း ..
အ၀င် call ကို ကိုင်နိုင်သွားပါမယ်။ သုံးကြည့်ဗျာ အမိုက်စားလေးပဲ။
download - (2.3MB)
dropbox - https://www.dropbox.com/s/pkoicyb178x8g9o/Mr.AD%20-%20CallHeads.apk
copy - https://copy.com/hQ7iEKawFIxN
Facebook သို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သူအား ဟက်ကာအဖွဲ့အစည်းမှ ဆုငွေချီးမြှင့်ခဲ့
iPhone/Pad/Pod touch တွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ ပုံထဲက လူတစ်ယောက်ပုံကို အများကြီးပွားလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလေးဖြစ်တဲ့ Clone Camera Pro v2.0.4 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Self-timer function နဲ့လည်းအသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဆော့ဝဲအဆန်းလေးဖြစ်တာကြောင့် iDevices တွေမှာရှိထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါပဲ။ Clone Camera Pro v2.0.4 for iPhone/Pad/Pod touch ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
Clone Camera Pro v2.0.4 for iPhone/Pad/Pod touch (iTunes Link for Non-Jailbroken Devices)
Clone Camera Pro v2.0.4 for iPhone/Pad/Pod touch (Crak app Link for Jailbroken Devices)
HTC မှ HTC Zara အမည်ရစမတ်ဖုန်းသစ်ကို ထပ်မံထုတ်လုပ်မည်
Ref&Credit: Smart Pro Journal
Apple အနေနဲ့ ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားအလိုက် နှစ်စဉ် မော်ဒယ် အသစ်များကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချလေ့ ရှိတယ်လို့ အားလုံး နားလည် ထားကြတယ်။ ဆိုလိုတာက နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း နှစ်ဝက်ကျော်တာနဲ့ ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားအလိုက် မော်ဒယ်များကို စတင် ရောင်းချလေ့ ရှိတယ်။ စတင်ရောင်းချတဲ့ အချိန်အထိ မိမိထုတ်ကုန်ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက် အတိအကျကို တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောကြားလေ့ မရှိခဲ့ပေ။ Apple ပရိသတ်ကို မှန်းချက် ပေးရုံသက်သက် သတင်းအစအနကိုသာ ရရှိစေတယ်။
တစ်နည်းပြောရရင် မှန်းချက်ပေး တိုက်ကွက် ဆင်ယူတဲ့ guessing game ကို အသုံးပြုလေ့ ရှိတယ်။ ထင်ကြေးပေး မှန်းဆ ပြောဆိုမှုတွေ အခြေခံပြီး Apple Cragy တွေကို မွေးယူနေတဲ့သဘော သက်ရောက်နေစေတယ်။ iPhone အသစ် ဘယ်တော့ ထွက်မလဲ၊ Sucreen ပိုကြီးတဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ ထုတ်မှာလား၊ Retina iPad Mini ဆိုတာ နောက်ထုတ်မယ့် iPad အသစ်လား၊ ဒီနှစ်အတွက် iWatch ကို ဈေးကွက် ပို့မယ်ဆိုပါလား၊ ဈေးနှုန်း အချိုသာဆုံးနဲ့ iPhone ကို အမြောက်အမြား ထုတ်မယ်ဆိုတာက တကယ်လား၊ Apple Glass ဆိုတာ ဘာလဲ၊ head-maunted displays တွေအတွက် patents တွေ ရှိနေပြီးပြီတဲ့လား၊ စသလို သတင်းအစအနလိုလို၊ ကောလဟလလိုလို၊ မှန်းဆပြောဆိုချက် သက်သက်လိုလို သတင်းစကားတွေ ရှိနေတဲ့ ပရိသတ်ကပင် စိတ်ဝင်တစား ရှိလာကြတယ်။
တချို့ဆိုရင် Apple ပလက်ဖောင်းဘက်ကို ပြောင်းကူးသွားတဲ့အထိ ရှိခဲ့တယ်။ ကြားရှိတဲ့ သတင်းအစအနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Apple ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတွေကို မေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်း တိတိကျကျ ပြန်လည် ဖြေကြား ပြောဆိုလေ့ မရှိသလို အတိအလင်း ပြောဆိုတာမျိုးလည်း မရှိခဲ့ပေ။ မကြာသေးခင်က ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး Apple ရဲ့ စီအီးအို ဖြစ်သူ Tin Cook ကို မေးမြန်းရာမှာ မိမိတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ် အချက်အလက် အတိအကျကို ရောင်းချရန် အသင့်ဖြစ်နေချိန်မှာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါမှ ထုတ်ကုန်ရဲ့ ထူးခြား သစ်လွင်မှုတွေကို ဝယ်ယူအသုံးပြုမှုတွေက တအံ့တသြ စိတ်ဝင်စားစေမယ်။ ဒီလိုပေါ်လစီကို အစဉ်တစိုက် လက်ကိုင်ထား ဆောင်ရွက်မှာပါလို့ ပြောကြားသွားတယ်။
Apple ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ သတင်းယိုပေါက်မှုတိုင်းက အာရှဖြန့်ချိရေး လမ်းကြောင်းက အများဆုံး ထွက်ပေါ်လာလေ့ ရှိတယ်။ တချို့ သတင်းပေါက်ကြားမှုတွေမှာ ပါတဲ့ ပုံတွေနဲ့ အသေးစိတ်အချက်တွေကလည်း အနီးစပ်ဆုံး မှန်ကန်လေ့ ရှိတယ်။ raw speculation ကနေ ထွက်ပေါ်လာတာလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Apple ရဲ့တန်းစီဇယားအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ပထမဆုံး လပတ်မှာ Apple TV refresh ကို ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဒုတိယသုံးလပတ်မှာ Mac Book Air ကို စတင်ပို့ခဲ့တယ်။ တတိယ သုံးလပတ်အတွက် iPhone 5S တို့ iPad5နဲ့ iPad Mini တို့အပြင် Modified iPod touch5နဲ့ iPod nano refresh တို့ကို တင်ပို့ရောင်းချမယ့် အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဒီဇိုင်းသစ်နဲ့ Retine MacBook Pro လည်း ထွက်လာနိုင်တယ်။ စတုတ္ထ သုံးလပတ်အတွက် iMac နဲ့ iMac Mini အသစ်တို့ကို ထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်မှာ ရှိတဲ့ မှတ်တမ်း တင်ပြချက်များအရ iPhone 31.2 သန်း၊ i Pads 14.6 သန်းနဲ့ Macs 3.8 သန်း ရောင်းချရမှုအပေါ် အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေ ၆.၉ ဘီလီယံ ရရှိသွားတယ်လို့ သိရတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဒုတိယ သုံးလပတ် အသားတင် အမြတ်က ဒေါ်လာငွေ ၈.၈ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့တာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ လျော့နည်းနေတာ တွေ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က iPhone ရောင်ရတဲ့ အရေအတွက်က ၂၆ သန်းသာ ရှိပြီး ဒီနှစ်အတွက် ၃၁.၂ သန်း ရောင်းရတာကြောင့် ပိုပြီး အားရကျေနပ်မှု ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ Apple အနေနဲ့ တတိယ သုံးလပတ်အပြီး ရလာနိုင်မယ့် အမြတ်အစွန်းငွေများအပေါ် ပိုပြီး စိတ်ဝင်တစား ရှိနေခဲ့တယ်။
မကြာသေးတဲ့ ကာလအတွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ့် iPhone 5S နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခက်အခဲတချို့ ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း ထွက်ပေါ်နေတယ်။ လက်ရှိ ဈေးကွက်မှာ ထွက်ပေါ်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့ Android နဲ့ Windows Phone ပလက်ဖောင်းတွေကို နောက်ဆုံး အခြေအနေအတိုင်း ယှဉ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ Ming Chi Kuo ရဲ့ သုတေသန ပြုချက်အရ iPhone 5S မှာ fingerprint sensor နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖော်ပြထားတာ မတွေ့ရပေမယ့် ဒီနှစ် ထုတ်မော်ဒယ်တွေရဲ့ function တွေအရ home button အောက်မှာ fingerprint sensor တစ်ခုကို မြှုပ်ထားနိုင်စရာအကြောင်း ရှိတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ Wii Phone ကနေ Apple အနေနဲ့ ဘတ်ဂျက် စမတ်ဖုန်း ထုတ်လုပ်မယ့်အကြောင်း screenshot ပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့ ဖော်ပြလာတာ တွေ့ရတယ်။
iPhone 5C လို့ အမည်ပေးထားတယ်။ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ဈေးကွက်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားကြံဆတာလို့ ဆိုထားတယ်။ ပလပ်စတစ် ကိုယ်ထည်နဲ့ တည်ဆောက်ထားတယ်။ “C” ဆိုတာက color အတွက် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ယူနေကြတယ်။ ရောင်စုံကာလာနဲ့ ကိုယ်ထည်ရှိပြီး ဘတ်ဂျက် စမတ်ဖုန်း ဈေးကွက်ကို အမြောက်အမြား ပို့ဆောင်ပေးဖွယ် ရှိတယ်။ အမည် ထုတ်ဖော် မပြောပြလို့တဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုက ၄ လက်မ အရွယ်အစားထက် ကြီးမားတဲ့ screen နဲ့ ထုတ်လုပ်မယ့် iPhone အသစ်တစ်ခုရဲ့ prototype တစ်ခုအနေနဲ့ ၁၃ လက်မ screen အရွယ်အစားရှိတဲ့ iPad အသစ်တစ်ခုရဲ့ Prototype တွေကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက် မျိုးဆက်သစ် iPhone နဲ့ iPads တွေရဲ့ screen အရွယ်အစားတွေ ပိုကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ ခြေရာကောက်ပြလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လက်ရှိ iPhone မော်ဒယ်တွေမှာ ၃.၅ လက်မနဲ့သာ တွေ့ရပြီး iPad တွေကိုလည်း ၇ လက်မ အရွယ်အစားနဲ့ ၉.၇ လက်မ အရွယ်အစားတို့နဲ့သာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ Screen အရွယ်အစား ကြီးကြီးနဲ့ ထုတ်လုပ်လာကြတဲ့ Samsung တို့ HTC တို့ Motorola တို့ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြင်ဆင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တတိယ သုံးလပတ်မှာ စတင် တင်ပို့ ရောင်းချဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ iPad5နဲ့ iPad Mini2ကိုလည်း ပရိသတ်က ဘယ်လိုပုံစံ ရှိနေသလဲလို့ မှန်းဆကြည့်နေကြတယ်။ iPad5က iPad4ထက် ပိုပြီး ပါးလျပေါ့ပါးမှာ အသေအချာ ဖြစ်တယ်။ iPad Mini2မှာလည်း retina display နဲ့ တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတာ ၅၀% သေချာနေတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာပြန်ပါတယ်။
ထုံးစံအရတော့ Apple က ထုတ်ကုန် မော်ဒယ်သစ်တွေကို ၁၂ လခြားပြီး လွှတ်ပေးလေ့ ရှိတယ်။ နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းတစ်ခုကတော့ Google Glass ကို ကြည့်ရှုပြီး wearable compating အပေါ် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့ Apple ရဲ့ စီအီးအို Tin Cook က အရိပ်အမြွက် ပြောဆိုလာတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီအတွက် iWatch ဆိုတာကို ရှေ့တန်းထား ပြီး ပြင်ဆင်မှုတွေရှိလာသလို Apple Glass နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Apple ပရိသတ်ရဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေ ထပ်တွေ့လာရတယ်။ Apple ရဲ့ မှန်းချက်ပေး ကစားကွက်တွေကြောင့် Apple ထုတ်ကုန်တွေအပေါ် Apple ပရိသတ် သန့်သန့်လေးထက် တခြားပလက်ဖောင်း ပရိသတ်တွေပါ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ် ဖြစ် Apple ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေက အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နဲ့ သားသားနားနားရှိတာ အမှန်ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တန်း ထွက်လာတဲ့အခါမှာ မျှော်မှန်းထားသလောက် ကျေနပ်ရတဲ့ အခြေအနေ အစဉ်အလာ မရှိခဲ့ပေ။ အသေးစိတ် အချက်အလက် ဝှက်ဖဲလေးတစ်ခုနဲ့ ဈေးကွက် မြှင့်တင်တဲ့ နည်းလမ်းက ချက်ချင်းဆန်းသစ်တဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပစ်တင်လာတဲ့ Android နဲ့ Windows Phone သုံး စမတ်ဖုန်းတွေကို ဆက်လက် အနိုင်ယူမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
သမ္မတဘားရက်အိုဘား မားက ဆီးရီးယားသမ္မတဘာ ရှားအယ်လ်အာဆတ်၏ အစိုး ရကိုပြစ်ဒဏ်ပေးမည့် ဒုံးကျည် ဖြင့်တိုက်ခိုက်မည့်အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဓာတုလက်နက်အသုံးပြု တိုက်ခိုက်မှုပြုသည်ဟူသော စွပ် စွဲချက်ဖြင့် ဆီးရီးယားအစိုးရအား အရေးယူရေး အတွက် လွှတ်တော် မှ ထောက်ခံမှုရရှိရန်ကြိုးပမ်းမည် ဟူ၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး နောက် ယခုကဲ့သို့ အစဉ် အလာ နှင့်ဆန့်ကျင်သော အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ခြင်းမှာ အားလုံးကို အံ့ အားသင့်စေခဲ့ သည်ဟုဆို သည်။
စင်စစ်အားဖြင့် စစ်ရေးအ ရအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအား အ မေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်များ အားလပ်ရက် အနား ယူရာမှ ပြန် လာချိန် အနည်းဆုံး စက်တင်ဘာ ၉ရက် အထိ ရွှေ့ဆိုင်း ထားမည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာ တွင် သမ္မတအို ဘားမားက သူ့အနေနှင့် လွှတ် တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂရုမ ထားဘဲ တိုက်ခိုက်ပိုင်ခွင့်ကို ဆုပ် ကိုင် ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်အရာရှိတစ်ဦးကမူ ရပ်နားထား သည့် အချိန် အတွင်း နိုင်ငံတကာမှ ထောက်ခံအားပေး မှုရရှိရန် သမ္မတအို ဘားမားအနေ နှင့် ဆောင် ရွက်နိုင်မည့် အချိန် ရ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။
လွန်ခဲ့သည့်ရက်က ကိုင်ရို တွင် အာရပ်အဖွဲ့ချုပ်၏ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် သမ္မတအာဆတ် ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချမည်ဟု မျှော် လင့်ကြောင်း သိရသည်။ လာမည့် ရက်သတ္တပတ်တွင် ဆီးရီးယားအ ကျပ် အတည်း အရေး ကိစ္စက လွှမ်း ခြုံနေမည့် ဂျီ- ၂ဝထိပ်သီးဆွေး နွေးပွဲကျင်းပမည့် ရုရှားနိုင်ငံသို့ သမ္မတအိုဘား မားတက်ရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတအိုဘားမားအနေ နှင့် ဆီးရီးယားအားစစ်ရေးအရ အရေးယူရန် ဗြိတိသျှပါလီမန်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ် ရာ၌ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေး ဗစ်ကင်မရွန်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသော အဖြစ်နှင့် အလားတူရင်ဆိုင်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာ အကဲ ခတ်သူတို့က သတိပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အိမ်ဖြူတော်ရို့စ်ဂါး ဒင်းတွင် မိန့်ခွန်းပြော ကြားမှုအ တောအတွင်း သမ္မတအိုဘား မားက တိုက်ခိုက်မှုအတွက် မည် သည့်အချိန်တွင် တိုက်ခိုက်သည် ဖြစ်စေ တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ပြင် ဆင်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တိုက် ခိုက်မည့်အချိန်သည် မနက်ဖြန် သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ရက်သတ္တ ပတ် သို့မဟုတ် နောက်တစ်လ လည်းဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတအိုဘားမားက ထည့်သွင်း ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင် စု၏ တိုမာဟော့ဒုံးကျည်များ တပ်ဆင်ထားသော စစ်သင်္ဘော ငါးစင်းခန့်သည် အရှေ့မြေထဲ ပင်လယ်တွင် ဆီးရီးယားအစိုးရ ပစ်မှတ်များကို အတိအကျထိ မှန်အောင် ပစ်ခတ်ရန် အသင့်ရှိ နေကြောင်း သိရသည်။ အလား တူပင် ပြင်သစ်နိုင်ငံကလည်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်သားတည်းရှိ နေမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ref-AFP ၊စက်တင်ဘာ(၂) ၊ ရန်ကုန်တိုင်းမ်နေ့စဉ်သတင်းစာ
Google Glass ရောင်းချမည့်ရက်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်သို့သတ်မှတ်
The Syrian Obsservatory for Human Rights ဟု အမည်ရသော လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော (၂၉) လ အတွင်း သေဆုံး အရေအတွက်မှာ ၁၁၀၃၇၁ ဦးရှိ သွားပြီဟု ဆိုသည်။
ထိုကိန်းဂဏန်းထဲတွင် အရပ်သား သေဆုံးသူ အရေ အတွက်မှာ ၄၀၁၄၆ ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအထဲတွင် အမျိုးသမီး သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ၄၀၀၀ ခန့် ပါဝင်ပြီး သေဆုံးသူ လူမမယ် ကလေးအရေအတွက်မှာ ၅၈၀၀ ဖြစ်ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ အဖွဲ့၏ မြေပြင် စာရင်းအရ သူပုန်ဘက်မှ သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ၂၁၈၅၀ ရှိကြောင်း ဖေါ်ပြပြီး အစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ သေဆုံးသူ အရေအတွက်မှာ ၂၇၆၅၄ ဦးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းအပြင် အစိုးရလိုလားသူ ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၇၈၂၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ရပြီဟု ဆိုသည်။
ဆီးရီယားပြည်တွင်းစစ်သည် အစိုးရ အပြောင်းအလဲ လုပ်ရန် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုသူများကို စစ်တပ်မှ လက်စားချေ တိုက်ခိုက်ရာမှ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ပြင်သစ်သည် ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် ကွန်ဂရက်နှင့် ပြင်သစ်ပါလီမန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းသွားမည်
ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဆီးရီးယားအပေါ် တိုက်ခိုက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ရန် အမေရိကန် ကွန်ဂရက် နှင့် ပြင်သစ်ပါလီမန်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ဆိုင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြင်သစ် သမ္မတရုံး တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ထုတ်ဖော် ပြောကြား ခဲ့သည်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားက ဆီးရီးယား သမ္မတ ဘာရှာအယ်လ်အာဆတ် အစိုးရ သည် ပြည်သူများကို ဓာတု လက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဆီးရီး ယားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်သင့်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်၌ ထုတ်ဖော် ပြောကြားပြီး နောက်အဆိုပါ တာဝန်ရှိသူ၏ မှတ်ချက်ပြုပြောကြားချက် ပေါ်ထွက် လာခြင်းဖြစ် သည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ဆီးရီးယား အစိုးရကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ရေး အတွက် အမေရိကန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒအရှိဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးရီးယားအရေး ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အချေအတင် ဆွေးနွေးရန် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ပြင်သစ်ပါလီမန်သို့ အဆိုပြုချက်တင်သွင်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်သစ်သမ္မတ ဟော်လန်ဒ်က တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် အိုဘားမား ကို ပြောကြားထားသည်။ ပြင်သစ် သမ္မတနှင့် အမေရိကန် သမ္မတ နှစ်ဦးစလုံးသည် အာဆတ် အစိုးရအနေ ဖြင့် ပြည်သူများကို ဓာတုလက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ထားပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံကို စစ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း အတည်ပြုပြော ကြားထားသည်ဟု သိရသည်။
အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ဆီးရီးယားအစိုးရက ပြည်ပကျောထောက်နောက်ခံ အတိုက်အခံတိုက်ခိုက်ရေးသမားများကို ဓာတုလက်နက်အသုံးပြုကြောင်း ပြောကြားလိုက်ပြီးနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဆီးရီးယားကိုတိုက်ခိုက်သင့်ပြီဟု ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားက သြဂုတ် ၃၁ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
၎င်းအနေဖြင့် လွှတ်တော်အမတ်များ၏ တိုက်မိန့်ကိုလည်း ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း သမ္မတအိုဘားမားက ပြောကြားလိုက်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်များက ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်များ၏ ပြောဆိုသံများကို ကြားပြီးသားဖြစ်ကြောင်း အိုဘားမားကပြောကြားသည်။
ကွန်ဂရက်ခေါင်းဆောင်များသည် ဆီးရီးယားအရေးဆွေးနွေးရန် သဘောတူထားသည်။ ကွန်ဂရက်က လက်မခံခဲ့သည်ရှိသော် စစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ် ၎င်း၏အာဏာကို အသုံးပြုတိုက်မည်၊ မတိုက်မည်ဆိုသည်ကို အိုဘားမားက မပြောဘဲရှိနေသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့ သတင်းမီဒီယာတွေ
က တည့်မတ်ပေးဖို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒီကနေ့ တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော် လယ်တောခန်းမမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)တို့
တွေ့ဆုံရာမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးထည့်သွင်းပြောခဲ့
တာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်း ကောင်စီ(ယာယီ) အတွင်းရေးမှူးဦးကျော်မင်းဆွေက
RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ပြည်သူတွေရဲ့ လိုလားချက်ကို သူနားလည်တယ်၊ နံပါတ်(၁)က တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းတာကို
လိုလားတယ်၊ (၂)ကတော့ပြည်သူလူထုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်၊ဒီလိုလားချက်
နှစ်ရပ်ကိုသူနားလည်တယ်၊ အဲဒါကို ဖြည့်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ပြောတာပေါ့၊သူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်း၊
အစည်းတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်တယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်တွေလည်းအများကြီးထိုးနိုင်
တယ်ပေါ့၊ နောက်အစိုးရလုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာ ဒီစတုတ္ထမဏ္ဍိုင်က အရေး
မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ကလည်း သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ မီဒီယာဥပဒေကြမ်း
နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကွဲလွဲနေသေးတဲ့အချက်တချို့အကြောင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်
ကို ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ကလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ
တို့ အကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ၊ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်အေး၊
အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်မင်းဆွေတို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဂတိလိုက်စားမှုကို တိုက်ဖျက်တဲ့အနေနဲ့ တရုတ်အမျိုးသား ရေနံကော်ပိုရေးရှင်း China National Petroleum Corporation (CNPC) ကုမ္ပဏီဥက္ကဌ ဖြစ်သူ Jiang Jiemin ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။iang Jiemin ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လအထိ CNPC ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး သူ့ကို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု ဥပဒေဖော်ဖျက်မှုတွေကြောင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ရှင်ဟွာ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းမှု ဥပဒေ ဖောက်ဖျက်မှု ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အဂတိလိုက်စားတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး CNPC ကုမ္ပဏီက အမှုဆောင် အကြီးအကဲ ၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
CNPC ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး လောလောဆယ်မှာ ရခိုင်ကမ်းလွန် ရေနက်ကမ်းလွန်ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ ရာဖွေရေး၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာ ဓာတုချက်စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ယူနန်ပြည်နယ်တွေကို ဆက်သွယ်တဲ့ ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှု အစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ Jiang Jiemin ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း အမြောက်အများကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သြစတြေးလျ နိုင်ငံက ဒီတပါတ်ကုန်မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်တဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့ ဟောကိန်းကောက်ချက်တွေအရ အတိုက်အခံ ပါတီ ခေါင်းဆောင်က အပြတ် အသတ် မဲအသာ၇မှု တွေ ပြသ နေတဲ့ အကြောင်း ဒီကနေ့မှာ ထွက်တဲ့ ကောက်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ဘယ်သူ့ကို နှစ်သက် သလဲဆိုတဲ့ ကောက်တမ်းအရ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် Tony Abbott က ၄၃% အသာရနေပြီး ဝန်ကြီးချုပ် Kevin Rudd က ၄၁% ဖြစ်နေပါတယ်။
ပါတီ ၂ ခု နှိုင်းယှဉ် လိုက်တဲ့အခါမှာ လေဘာပါတီက ၃၃% နဲ့ အတိုက်အခံ ညွန့်ပေါင်း က ၄၆% အသာရ နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ မစခင် တပါတ်အလို မှာ လက်ရှိ အစိုးရပါတီက နောက်ကို ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင် ခန့်မှန်းမဲတွေဟာ များသောအားဖြင့် တိမ်းစောင်းမှားယွင်းမှု ၃% လောက်ဘဲ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ် Kevin Rudd ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ အကြို တပါတ်မှာ မဲဆွယ်စည်း ရုံးရေးတွေ ပြည်နယ်တိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်းကို သွားနိုင်သရွေ့ သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတပါတ်ထဲမှာလဲ Townsville မြို့မှာ ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း တန်ဘိုးရှိတဲ့ အားကစားနဲ့ ဖျော်ဖြေရေးရုံကို ဆောက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ တွင်းထွက် သယံဇာတပစ္စည်း တူးဖေါ်တဲ့ကရိယာ အသစ် အဆန်းတွေ အတွက် ရံပုံငွေ ကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းနဲ့ အဓိကအားဖြင့် လူတွေရဲ့ အလုပ်အကိုင် လုံခြုံရေးကို ဆောင်ရွက်သွါးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် တိုနီအာဘော့တ် ကတော့ သုံးငွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထုတ်ပြန်မှု မရှိ သေးတဲ့အတွက် ဖိအားပေးခံနေရပြီး ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရက်ပိုင်း အတွင်း ထုတ်ပြန်မယ်လို့ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အတိုက်အခံ ညွန့်ပေါင်းက ကျန်းမာရေး ပညာရေးနဲ့ ပင်စင်ခံစားခွင့်ငွေတွေ ထိခိုက်မှု ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုပါတယ်။
ကြိုတင်ကောက်တမ်းအရ လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် ကယ်ဗင်ရဒ် ရှုံးနိမ့်မယ်လို့ ပြသ (Credit: AAP)
အစ္စရေးနိုင်ငံလုပ် ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုအား ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ရုရှားလွတ်တင်
အစ္စရေးနိုင်ငံလုပ် AMOS -4ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုကို Zenit ဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်စဉ်
ရုရှား နိုင်ငံသည် အစ္စရေး နိုင်ငံလုပ် Afro - Mediterranean Orbital System -4( AMOS -4) အမည်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တု တစ်လုံးကို Zenit - 2SB ဒုံးပျံဖြင့် ကာဇက်စတန် နိုင်ငံရှိ Baikonur ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ရေး စခန်းမှ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ဒေသ စံတော်ချိန် ဝဝးဝ၅ နာရီ ( ဂရင်းနစ် စံတော်ချိန် သြဂုတ် ၃၁ ရက် ၂ဝးဝ၅ နာရီ )အချိန်တွင် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်း အတွင်းသို့ လွှတ်တင် ခဲ့ကြောင်း ရုရှားအာကာသ
အေဂျင်စီက ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့သည်ဟု CNN သတင်းဌာန ၏ Newsnow သတင်း တစ်ပုဒ်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုဟ်တုကို အစ္စရေး အာကာသယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး စက်မှုလုပ်ငန်းမှ ထုတ်လုပ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄င်းကို လွှတ်တင် ခြင်းဖြင့် ရုရှား ၊ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း ဒေသ ၊ အရှေ့တောင် အာရှနှင့် အလယ်အာရှ ဒေသတို့ရှိ အင်တာနက် အသုံးပြုသူ များအား DTH ၊ VSAT နှင့် Broadnand အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by drmyochit Monday, September 02, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
တောင်သူများအား ဥပဒေသားကောင်ဘဝရောက်အောင်မလုပ်ကြရန် လယ်ယာမြေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌပြောကြား
လယ် သမားများအား ချစ်သလိုလိုနှင့် ဥပဒေသားကောင်ဘဝသို့ရောက် အောင်တွန်း၍မပို့ကြရန် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည်မြို့ နယ်အမှတ်(၆) သကြားစက်နှင့် ဒေသခံတောင်သူလယ်သမားများ လယ်ယာမြေပြဿနာတိုင်ကြား စာများနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးရန် ရောက်ရှိနေသော လယ်ယာမြေ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦး တင်ထွဋ်က ရေတာရှည်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးခန်းမ၌ ဩဂုတ် ၂၉ရက် နံနက် ၉နာရီက လယ် ယာမြေများ သိမ်းဆည်း ခံထားရ သော တောင်သူ လယ်သမား များ နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသွားသည်။
ရေတာရှည်မြို့နယ် တောင် သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာမြေ များ အသိမ်းခံထားရသည့်ကိစ္စ တိုင်ကြား စာနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ''ခွင့်ပြု၍ရ သောသစ်တောကြိုးဝိုင်းမြေ လွတ်များ၊ မြေရိုင်းများ တို့၌သိမ်း ဆည်းခံခဲ့ကြရသော မူလလက် ငုတ်လုပ်ကိုင်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသူများ လက်သို့ အထောက် အထား စာရွက် စာတမ်းရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည် ဖြစ်စေ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းအဆိုပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ ကြောင်း '' ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏တရား ဝင်ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြံစိုက် ဧကကွက်တွေကို သကြားစက်က သိမ်းခဲ့တာပါ။ အနှစ် ၂ဝကျော် ပြီ။ အခု သူတို့စက်ရုံက မစိုက်ဘဲ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို အနှစ် ၃ဝစာ ချုပ်နဲ့ ငှားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့အောင် ချမ်းသာ ရွာက အထိ အနာဆုံးပဲ။ တစ်ရွာလုံး ဧက ၂၂၈ဝကျော်အသိမ်းခံလိုက်ရ တယ်။
တအား ထိခိုက် နစ်နာကုန် တယ်။ ဘဝတွေပါ ပျက်ကုန်တယ်။ အဲဒီနောက် နိုင်ငံတော်ကလက် ငုတ်တော့ ပြန်ပေးတယ်ကြားလို့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်လက်ငုတ်အ ကွက်လေးတွေ ဝင်လုပ်ကြတာ၊ အဲဒီကို စက်ရုံမှူးက တရားစွဲလို့ ရေတာရှည်စခန်းမှာ တရားရင် ဆိုင်နေကြရတယ်။ ကျွန်တော့် အဖေဦးသိန်းမြင့်က အသက် ၇၀ ကျော်ပြီ။ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ ဘူး။ အကွက်က အဖေ့နာမည်နဲ့ ဆိုတော့ အဖေတရားစွဲ ခံရ တာ ပေါ့။ လုပ်တာက ကျွန်တော်တို့ ဝင်လုပ်တာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် နဲ့ လူချင်းလဲပေးပါပြောတာမရ ဘူး။ အကွက် က နည်းနည်းလေး ပါ။ ပိုင်တာက လေးဧက၊ ဝင်လုပ် တာက ဒသမအစိတ်၊ သုံးဆယ် လောက် ဝင် လုပ်တာ။ အဖေဆို ဥပုသ်နေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တောင် မတက်နိုင် ဘူး။ သုံးပတ် လောက် ရှိပြီ။ ရုံးချိန်းနဲ့တိုက်နေလို့ လေ။ ကျွန်တော်တို့မှာ သူများ တွေလို ထွန်တုံးတိုက်ပွဲတွေ ဘာ တွေ လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ စက် ရုံက ကုမ္ပဏီကိုငှားထားတယ်ပြော ပြီး ကျွန်တော်တို့အကွက်တွေကို သူတို့နဲ့လက်သင့်တဲ့သူတွေကို မျက် နှာလိုက်ပြီးဝင်လုပ်ခွင့်ပေးနေတော့ ကျွန်တော်တို့လဲ ဘယ်ခံချင်မှာ လဲ။ သူတို့စိုက်ထားတာတွေလုံးဝ သွားမထိပါဘူး။ ဒီဘက်မှာ သူတို့ မလုပ်လို့ လွတ်နေတဲ့အကွက်လေး ဝင်လုပ်တာ။ တရားစွဲခံရတဲ့အထဲ ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ ကျွန်တော့် ဘကြီးနှစ်ယောက်လဲပါတယ်'' ဟု အောင်ချမ်းသာရွာမှ ကိုအေး ကိုက ပြောသည်။
''ကျွန်မက ရေတာရှည်ရပ် ကွက်(၁)က ဒေါ်ကြည်မြပါ။ ကျွန် မတို့မိသားစုကိုးယောက်ပေါင်း ဧက ၁၀ဝလောက် အသိမ်းခံရ တယ်။ အားလုံးဘဝပျက်ပြီးလုပ် စားစရာမရှိလို့ ဟိုရောက် ဒီရောက် တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ အခု တရားစွဲ ခံထားရတဲ့အထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ညီမ ဒေါ်လှကြည်(အားမန်သစ်ဆန်စက် ပိုင်ရှင်)ပါတယ်''ဟု အခမ်းအနား သို့လာရောက်နားထောင်သော ဒေါ်ကြည်မြက ပြောသည်။
ကိုဆွေ ၊သြဂုတ်(၃၁) ရန်ကုန်တိုင်းနေ့စဉ်သတင်းစာ
ရန်ကုန်တိုင်း၊ သံလျင်မြို့၊ သိပ္ပံလမ်းမှာနေသည့် ဗမာမိန်းကလေးတစ်ယောက်။ အမည်က(……)၊ အသက်(…..) နှစ်။ ဘွဲ့ရပြီးသူ။
သူမအလုပ်လုပ်သည့်ဆိုင်ရှင် အိမ်အမှတ်(၁၄)၊ သီရိလမ်းမှ ဦးဝင်းမောင်+ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း၏ သား အောင်ကျော် ထွန်းနှင့် လက်ထပ်ယူကြသည်။ မယူခင် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ကြဖို့ ကတိပေး ခဲ့ကြသော် လည်း ရက်ပိုင်းအတွင်း အောင်ကျော်ထွန်း သဘောထားပြောင်းလဲလာခဲ့။
နှစ်ဖက်မိဘများအိမ်မှာ မနေကြဘဲ အိမ်ငှားနေကြခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှု ရှိစေ ချင်၍ ဖြစ်သော်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာထဲ ဝင်ရမည်ဟု အောင်ကျော်ထွန်းက ဆိုလာသည်။ ဗလီ တက်ပြီး ပြန်လာချိန်မှ စဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မိန်းကလေးက ဆိုလာသည်။
မိန်းကလေးက မကူးပြောင်းသည့်အခါ အောင်ကျော်ထွန်းက ပညာစပြတော့သည်။ ဈေးဖိုးလုံးဝ မပေးတော့။ ဟင်းချက်စရာမရှိ၍ ထမင်းမချက်ဘဲ ကောင်မလေးက သူမ မိဘများအိမ် လိုက်စား ဖို့ အောင်ကျော် ထွန်းကို ခေါ်သွားသည်။ ဘုရားစင်မြင်လျှင် စားမရ-သောက်မရဟုဆိုကာ ထမင်းလည်း မစားနိုင်၊ ရေလည်းမသောက်နိုင် ဖြစ်ခဲ့သူက အောင်ကျော်ထွန်း။
ဤသို့ဖြင့် လင်မယားနှစ်ယောက် လုံး သူ့အိမ်သူပြန်စား၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်စားစနစ်ဖြင့် ဆက်လက်ပေါင်းသင်း နေထိုင်ကြလေ၏။
မကြာလိုက်ပါ အောင်ကျော်ထွန်းက ကိုယ်ထိလက်ရောက် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု ပြုလာတော့သည်။ မဝင်လျှင် ကွာရှင်းပေးရမည်ဟု အောင်ကျော်ထွန်းက တောင်းဆိုလာသည်။ ကောင်မလေးက "ခုယူ ခုကွဲ မလုပ်နိုင်" အရှက်တရားဖြင့် ရပ်တည်ရသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်၍ ချက်ခြင်းကြီး မကွာရှင်းနိုင် ဟု ငြင်းဆိုလိုက် သည့် အခါ အောင်ကျော်ထွန်းက ရှေ့နေခေါ်လာပြီး လက်မှတ်ထိုး ကွာရှင်းခိုင်းတော့ ၏။ ကောင်မလေးဘက်မှ အသိသက်သေမရှိသည့်အခါ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းကြလေသည်။
15.8.2013 ရက်နေ့မှာ လက်မှတ်ထိုးကွာရှင်းပေးပြီးသည့်အခါ ကောင်မလေးက ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ဘာသာသိမ်းသွင်းမှုဖြင့် တရားစွဲလိုက်၏။ ရဲစခန်းက တရားရုံးကို ဦးတိုက် လျှောက်ခိုင်း၏။ တရားရုံးက လက်ခံပြီး ရဲကိုပင် ပြန်စစ်ဆေးခိုင်း၏။ ယခုလ (၆) ရက်နေ့ (6.9.2013) မှာ တရားခွင်မှာ စတင်စစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။
အောင်ကျော်ထွန်း(ခ) ဘစ်တာ ကလည်း ပြန်တိုက်သည်။ မီးရှို့မည်၊ အကြမ်းဖက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည်ဟု ကောင်မလေး၏ မိဘများကို ပြန်တရားစွဲခြင်း ဖြစ်၏။
3.7.2013 မှာ မန္တလေးသို့ ခိုးပြေးကြသည်။
6.7.2013 မှာ ပြန်ရောက်သည်။
15.8.2013 မှာ ကွာရှင်းသည်။
6.9.2013 မှာ တရားရုံးချိန်းသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်သည် တိုက်အမှတ် (၆)၊ အခန်း (၄)၊ အောင်နိမိတ်လမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှာ အိမ်ငှားနေထိုင်ကြပြီးမှ ကွာရှင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ရာ အိမ်ရှင်များက မိန်းကလေးဘက်မှ သက်သေလိုက်ပေးကြမည် ဆို၏။
အောင်ကျော်ထွန်း(ခ) ဘစ်တာက ပထမ-အေးအေးဆေးဆေး သိမ်းသွင်း၏။ ဒုတိယ-အကြမ်းဖက်လာ၏။ တတိယ- ဓားကြိမ်းကြိမ်းလာ၏။
မိန်းမယူထားပြီး မိန်းမကို ဘာသာသိမ်းသွင်းနိုင်မှ ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းမှ လက်မထောင်နိုင်မှာ။ မသိမ်းသွင်းနိုင်ရင် မျက်နှာငယ်ရတယ်။ ဘာသာခြားမိန်းကလေးတွေကို လက်ထပ်ယူပြီးရင် ဘာသာသိမ်းသွင်းရတာဟာ အစ္စလာမ်ရဲ့ တာဝန်ပဲ ဟု အောင်ကျော်ထွန်း(ခ)ဘစ်တာက အမြဲပြောသည်ဆို၏။
ယခုတော့ ဘာသာမတူ၍ အိမ်သူမဖြစ်နိုင်တော့။ တစ်ခြားမည်သည့်အကြောင်းမျှ မရှိဘဲ၊ ချစ်သူနှစ်ဦး လမ်းခွဲလိုက်ကြ၏။
ဘာသာက အဓိကလား၊ လူကအဓိကလား….?
အားနွဲ့သည့် လူများစုကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ပေးကြပါဗျာဟု ဗျိုး….ဟစ်လိုက်ချင်တော့၏။
လူကိုယူပါ၊ ဘုရားကိုချမ်းသာပေးပါ မစ္စတာကုလားတို့ရာ- ဟုတ်ဘူးလား….?။
အကြောင်းစုံသိလိုက-ဦးပညာဓဇ=09-421007251 သို့ဆက်သွယ်ပြီး၊ ကောင်မလေးနှင့် တိုက်ရိုက် ပြောနိုင်ပါသည်။
From : ..wirathu
Easy Uninstaller Pro အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
မိမိတို့ ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို လက်အညောင်းခံ၊ အချိန်အကုန်ခံပြီး တစ်ခုချင်းစီ ဖျက်ဖို့ မလိုအောင် ပြုလုပ်ပေမယ့် easy uninstaller pro ဆော့ဝဲလ်လေးဖြစ်ပါတယ် .. မိမိဖျက်ချင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေ ကို select ပေးပြီး One click လုပ်ရုံနဲ့ ပယ်ဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် …စက်ရုပ်ဖုန်းတွေအတွက် သွင်းထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပယ် ဖျက်ပေးနိုင်မယ့် tool တစ်ခုဆိုရင်လည်း မမှာပါဘူး….ဒါအပြင် ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုရဲ့ name,version,update time,size စတာတွေလည်း ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
မှာလေ့လာပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Download>>> hotfile (or) mediafire